ezi oke nke mkpọsa nke ndị Europe na ndị Eshia - Jeune Afrique - TELES RELAY
Ogologo oke ohi nke ndị Europe na ndị Eshia - Jeune Afrique
mgbe Buhari gachara, Macky Sall gbagoro n’elu efere - Jeune Afrique
Nady Bamba, Assoa Adou, Habiba Touré… Ndị kwesịrị ntụkwasị obi nke…
Tebboune na-akwadebe echiche ọha maka iziga ndị agha na mba ọzọ? ...
Ighapu ihe ndi ozo di iche iche nye aka azuta azu: nke a bu ihe ndi ozo megidere West Africa, ndi ndi Europe na ndi Eshia na-achota otutu ihe ha. Kedu etu amụma a dị? Zaa na infographics.
Iribiga ihe ókè nke mba ndị dị n'ebe ugwu na-akpatakarị ọnọdụ ndị na-emegiderịta onwe ha. Mgbe ndị Europe na ndị Eshia bukọọrọ ngwongwo nke azụ ha, ha buru ụzọ gaa ịkụ azụ, gaa n'akụkụ ọzọ nke ụwa. Mgbe ahụ ha tụgharịrị na aquaculture na ịkọ azụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke azụ na azụ azụ. Ewezuga na ụdị mmepụta a, nke na-achị ahịa ụwa ugbu a, na-akatọkarị ya maka mmetọ ọ na-eweta. E kere ya iji mejupụta mmebi nke ihe akụ na ụba site na ịkụ azụ, ọ dịkwa oke nghọta na-enye aka ma na-enyere aka iwepụ oke osimiri nke obere azụ ọhịa. N'ịbụ ndị a natara, a gbanwere ha ntụ ọka na mmanụ, nke na-eje ozi dị ka ihe ndabere maka inye anụ ụlọ na anụ ụlọ nri ...
Anyi aghaghi "nye ogologo anụ nri", iji aha Greenpeace na Changing Markets Foundation nke bipụtara na June 1, ọbụlagodi na ọ pụtara ịhazigharị usoro okike nke obodo na ime ka nchekwa nri nke ndị ọdịda anyanwụ Afrịka belata. Kwa afọ, ọkara nde tọn nke obere azụ ọhụrụ - sardinellas na bongas nke gaara enye nde mmadụ 33 nri - na-egbu azụ site n'ụsọ oké osimiri nke West Africa ka-esichara n'ime nri salmon si Norway, trout si China ma ọ bụ pigs si France.
Azụmaahịa na-aga nke ọma, mana ọ na-emebi ma na-enweghị ahịa
N'ịbụ ndị ama ama ruo ugbu a juputara na azụ, na obere nlebara anya, mmiri nke Senegal, Gambia na Mauritania abụrụla "ebe" ọhụrụ nke ahịa ụwa maka nri azụ na mmanụ azụ. N'ihe na-erughi afọ iri, a na-emepe ihe ọkụkụ iri atọ na-arụ ọrụ na mba atọ ahụ. E wezụga ọdachi nke obibi nke a na-anọchite anya mpaghara ahụ, azụmahịa a na-egbochi ndị bi n'ụsọ oké osimiri isi mmalite nke ego ha na isi protein ha.
Azụmaahịa na-aga nke ọma, mana ọ na-emebi ma na-enweghị atụ, nke Jeune Africa na-enye gị ka ị ghọta ọrụ dị n'ime ma tụọ ọnụ ọgụgụ na infographics.
Edemede a pụtara na mbụ https://www.jeuneafrique.com/1186116/politique/peche-intensive-en-afrique-de-louest-quelle-est-lampleur-du-pillage-des-europeens-et-des -asians /
TELES RELAY 52662 posts 1 comments
Nady Bamba, Assoa Adou, Habiba Touré… Ndi kwesiri ntukwasi obi nke onye isi oche mbu…
Tebboune na-akwadebe echiche ọha na eze maka iziga ndị agha na mba ọzọ? - Nwa okorobịa Africa